Happy CookSTS Fry Pan 430(၂၂စင်တီမီတာ) စတီးရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Happy Cook STS Fry Pan 430(၂၂စင်တီမီတာ) စတီးရောင်
Ks 8,900 -5%
I am always interested to cook the western dishes. Seasoning is fun and most of it should be cooked with the non -stick pan. So I bought it . It is really helpful. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
အဆင်မြင့်ကိုရီးယားနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဂုဏ်ယူစွာထုတ်လုပ်ထားပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Stainless နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့်် ချက်ပြုတ်ရာတွင် လွန်စွာအဆင်ပြေစေပြီး ဆေးကြောရလဲ လွယ်ကူပါတယ်။ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mallတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် STS Fry Pan 430(၂၂စင်တီမီတာ) စတီးရောင်